शेयर बजारमा नयाँ रेकर्ड, नेप्से ८८ दशमलव १२ अंकले बढ्यो
आइतबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। नेप्से परिसूचक ४ दशमलव २२ प्रतिशत अर्थात् ८८ दशमलव १२ अंकले बढेर २ हजार १७५ दशमलव ३९ विन्दुमा बन्द भएको छ।
ब्रोकर कमिसन ३३ देखि ६० प्रतिशतसम्मले घट्यो, आइतबारदेखि लागू हुने
धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दलाल व्यवसायीले लिने सेवा शुल्क (कमिसन) ३३ देखि ६० प्रतिशतसम्मले घटाएको छ। धितोपत्र बोर्डले १२ पुसदेखि लागू हुनेगरी घटाएको यस्तो कमिसनमा धितोपत्र बजारको सुधार तथा विकासमा सहयोगी हुने बोर्डले जाकारी दिएको छ।
शेयर बजारमा दिनदिनै नयाँ रेकर्ड, एकै दिनमा सवा नौ अर्ब रूपैयाँको कारोबार
शेयर बजारमा आज फेरि अर्को नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। शेयर बजारमा आइतबार अहिलेसम्मकै धेरै रू. ९ अर्ब २२ करोड ७३ लाख बराबरको कारोबार भएको छ। गत बिहीबार पनि नेप्सेमा रू‍. ७ अर्ब ६१ करोडको कारोबार भएको थियो।
आज शेयर बजार परिसूचक नेप्से झण्डै ६५ अंकले बढ्यो
शेयर बजारमा परिसूचक नेप्से झण्डै ६५ अंकले बढेको छ। साताको चौथो कारोबारको दिन बुधबार नेप्से परिसूचक ६४ दशमलव ७० अंकले बढेर १ हजार ८ सय ७४ दशमलव ८१ अंकमा बन्द भएको छ।